Isticmaalka bacda galmada oo hoos u dhacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bacda galmada ay raggu u isticmaalaan. sawir: Claudio Bresciani / TT
Isticmaalka bacda galmada oo hoos u dhacday
43% ayaa isticmaasha iminka halka ay ka ahayd 48%
La daabacay tisdag 24 maj 2016 kl 12.02
Isbedel dhanka liidata oo uu isticmaalkiisu ka hooseeyo sidii hore ayaa ku dhacay dadyoowga isticmaala bacda galmada (Kondom). Halka dhanka kale aanay ahayn wax sidii hore looga xishooda hadal-hayntiisa sida uu ururka RFSU ku sheegay cabirkiisii sannadlaha ee isticmaalka bacda galmada loo gashado.
– Goolkayagu wuxuu yahay in kor loo qaado tirada dadyoowga isticmaasha kondom-ka, qaasatan xiriirrada cusub, hase yeeshee ay iminka middaasi hoos u dhacday, inkastoo aannu is-bedelku ahayn mid sidaa u wayn, sida uu sheegay Pelle Ullholm, ahna howl-wadeen ka howl-gala ururka daladda ururrada ee ku war-gelinta isu-tagga (RFSU).
Cidda ugu wanaag-san sidii ay horayba u ahaan jirtay ee isticmaala bacda galmada ayaa ah ragga isu galmooda, halka ay ugu liitaan ragga iyo haweenka isu-galmooda.
Gaar ahaan waxa loo baahan yahay in bacda galmada loo isticmaalo barashad cusub. Waxaa muuqatay in hab-sami loo arko shakhsi marka hore soo jeediya fikirka ah in bacda galmada la isticmaalo, sida uu sheegay Pelle Ullholm.
- Shakhsiga marka hore soo saara bacda galmada iyo in la isticmaalo, ayay dadka badankii u arkaan inuu yahay shakhsi masuuliyad qaadi kara, qof qaan-gaar, waayo-arag ah, ka fekera shaksiga kale.
Pelle Ullholm ayaa aaminsan in loo baahan yahay olole ballaaran oo ku wajahan ragga dhallin-yarada ah, qaasatan kolka laga hadleyo caafimaadka, galmada iyo jinsiyadda (lab ama dheddig).
Haweenku waxay si joogto ah ugu tagaan dhakhaatiirta cudurrada haweenka, halkaasina oo inta badan lagu war-geliyo habka looga hor-tegi karo dhibaatooyinka, suurtagal u haysta inay su’aallo weydiiyaan, isla-markaana weeydiiya. Dhallin-yarada raggu suurtagalkaa ma haystaan .